Aro iri iji meziwanye Digg | Martech Zone
Fraịde, Septemba 22, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
A naghị elekwasị ihu ụlọ ahụ anya n'akụkụ m ma ọ bụ na-elekwasị anya na-eme ka ọ dị mma maka mgbasa ozi ọha na eze ma ọlị. Ibe Digg m kwesiri inwe ntughari nke enyi m, diggs m n'oge na-adịbeghị anya, yana mpaghara ọdịnaya ndị ọzọ m nwere ike itinye (site na otu, wdg)
“Digg bụ ihe niile…” na-egbughị ohere. Bugharịa ihe menu elu. Ọ bụrụ na m chọrọ ịma ihe Digg bụ, tinye ihe njikọ. Na-ewere ezigbo ụlọ dị oke ọnụ.
Nkwupụta Pro / Con. Ọ ga-amasị m ịhụ onye nwere ezigbo okwu maka isiokwu, yana onye nwere isiokwu kachasị mma MEGIDE. Ka anyi bido nsogbu ahu. Okwu njedebe na-enweghị njedebe enweghị isi.
Ebee ka m ga-akwado? Adịghị m nnukwu olulu… mana m ga-achọ ịma ebe akụkọ m dị na saịtị ahụ. Ole ndị bụ ndị kacha egwu egwu 10?
Bibie nke nnukwu ibu Diggnation Podcast ọkọlọtọ. Sheesh… onye obere ọkà okwu ga-adọrọ uche karịa Podcast.
Kwado ntanye, ikekwe nkata na Diggs kachasị arụ ọrụ. Sere obodo n’oge.
Mkpado, mkpado, mkpado. Gị edemede inu. Ha na-eme n'ezie. Kedu ihe mere na agaghị ekwe ka ndị mmadụ tinye mkpado ha ka m nwee ike ịdenye aha "CSS" (dịka ọmụmaatụ).
Akụkọ na-abịanụ? Kedu maka Akụkọ Ọsọ Na-aga? Achọghị m ịma banyere akụkọ ngwọrọ na-abịa abịa. Ma ọ bụrụ na ọ nwetara 10 diggs na nkeji ole na ole… gịnị ma ị kwalite na osooso?
API? Ọ bụrụ na m ga-agbakwunye akụkọ m gụrụ ma ọ bụ nke m nyefere na weebụsaịtị m. RSS dị oke oke… mana API ga-enyere m aka itinye akwụkwọ.
Digg Alerts. Mgbe ndị enyi m gwuru otu akụkọ, kedụ ka m ga-esi ghara inwe anya?
Sep 22, 2006 na 4:47 PM
Point 8: kwenye kpam kpam. Naanị ihe dị njọ karịa ịhụ otu akụkọ ahụ na peeji nke Digg maka ụbọchị niile bụ ịhụ akụkọ ọjọọ / egwu / akụkọ jọgburu onwe ya na ibe na-abịa.
Sep 23, 2006 na 4: 22 AM
Isi # 7 bụ ezigbo ihe na-akpasu iwe. Ndi edemede ha adighi oke, aghaghi m etinye ufodu na Offbeat News n'ihi enweghi edemede.
Nov 15, 2006 na 4:46 PM
Banyere akụkọ na-abịanụ, ọ ga-ekwe omume idozi akụkọ ndị na-abịanụ site na ndị kachasị ewu ewu karịa ndị kachasị ọhụrụ. Achọpụtara m na nke ahụ bụ ụzọ dị mfe iji hụ ihe akụkọ kacha sie ike na-abịa n'oge ahụ.
Olileanya nke ahụ bụ ụfọdụ enyemaka. 🙂
Dec 11, 2006 na 4:26 PM
Jụọ ma ị ga-enweta (n'ihe banyere # 10):
Ndewo ụmụ okorobịa… ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ebe nrụọrụ weebụ iji bipụta akụkọ, nke bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi karịa Digg gbalịa Profigg.com Ọ bụ ọrụ ọhụụ nke ga - enyere ọkara na obere aka ọkwalite iji kwalite akụkọ ndị na - agaghị enweta visibiliti.
Nov 5, 2009 na 5:04 AM
Ekwenyere m kpamkpam na ya. Ejiri m ọtụtụ njikọ na profaịlụ Digg m. Ma, enweghị m ike ịbawanye digg na ya. Enwere m olileanya na usoro ndị a ga-enyere m aka nke ukwuu.